Hal Qabsigii iyo Xikmadihii Dadkii Hore | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdiraxmaan Cabdillaahi Adam, February 1, 2020
Qormadan waxaan kugula wadaagayaa qaar ka mid ah hal-qabsigii iyo xikmadihii dadkii hore, waxaan rumaysnahay in ay jiraan dad badan oo xikmad ehel la ah, waxaan xoogga u saaray xikmadaha dadkii hore wa in aan dadka xasuustan xikmadahaas kana faa’iidaystaan, maahmaah fog baana tiri (dad waa kii hore hadalna waa intuu yiri.).
Qofna ha canaanan si aan adiga laguu canaanan.
Waxaan bartay in aysan muhiim ahayn “maxaad hadda haysaa”, laakiin ay muhiim tahay “xaggee daqiiqaddaan kaddib rabtaa inaad gaartid”.
Geesinimadu waa qofka oo cabsidiisa xakameeya ee mahan qofka oo ay cabsidu ka guurto.
Masaafada u dhaxaysa riyada iyo runta waxaa la yiraahda ficil. La imow ficil si riyadaadu ay isugu rogto run.
Saaxiibka beenta ah wa sida harka oo kale, had iyo jeer wuu kula socda xilliga aad iftiinka ku jirtid lkn ma arkaysid xilliga aad mugdiga ku jirtid.
Intii hankaagu jiro ayey dadnimadaadu jirtaa.
“Dhaqanka Soomaalida waa hab nololeedka iyo nidaamka dhaqan ee dadka Soomaalida ah; taasi ooy ka mid tahay luuqada, cuntada, suugaanta, fanka, farshaxanta, habaynta iyo soo bandhiga heesaha Soomaalida, ruwaayadaha, majaajilooyinka u dhaqanka ah dadka Soomaalida ah meelkasta ooy joogaan, gaar ahaan inta ku dhaqan Bariga Afrika. Guud ahaan, dhaqanka Soomaalidu waa haybada iyo sharafta u gaarka ah bulsho weynta Soomaalida meel kastooy caalamka kaga dhaqan yihiin. Sidoo kale, dadka ku hadla Af Soomaaliga waxay leeyihiin fan iyo suugaan aad u heersareeya, qani ku ah aqoon iyo xirfad qoto dheer. In kastoo fanka maanta jira yahay mid aad u da’ yar wuxuu leeyahay waaxyo iyo noocyo aad u badan. Kuwaasi waxaa ka mid ah heesaha qaaciga, qaraamiga, heesaha jaaska, ruwaayadaha, majaajiloyinka, filimaanta, bandhigyada fanka, qoob-ka-ciyaarka iyo guud ahaan madadaalada ku baxda luuqada Soomaaliga.” – Tuke Somalism
Farxadu waxay kaa dhigaysaa mid wanagsan oo la jeclaysto, isku day inaad abidka faraxsanaatid.
Waligaa kuma noolaanaysid nolol farxad leh hadii ad ka walwalysid waxa ay dadka kale kaa aaminsanyihiin.
Qurux ma ahan in aad leedahay waji nuuraya lakiin waa in aad leedahay maskax qurxoon, wadne qurxoon iyo naf naf qurxoon.
In aad wax dhagaysato waa faaiido, in aad wax akhrisaa waa horumar balse in aan wax qortaa waa haybad.
Waqtigu wuxuu go’aamiyaa qofka aad la kulmayso nolosha, qalbigaagu wuxuu go’aamiyaa qofka aad rabto nolosha laakiin dabeecadaada iyo dhaqankaagu waxay go’aamiyaan qofka kula joogaya nolosha.
Hadii aad doonaysid in aad gaartid horumar aan macquul ahyn oo sare u fakar si aan loo fakarin.
Taariikhdaada iyo hab nololeedkaaga ayaa ka turjumaya qofka aad tahay, laakiin adiga ayaa ka masuul ah qofka aad noqon doontid mustaqbalka.
Waqtigu waa khayraadka noloshaada, waa khayraadka kaliya ee aad haysatid, waxaad go’aan ka gaari kartaa sida aad u bixinaysid khayraadkaas hubi halka aad ku bixinaysid iyo waliba sida aad u bixinaysid khayraadkaas.
Tuugu waa midka ku xada, dilaagu wuxuu laaya dadka, laakiin beenlow ma lahan jaho loo raaco.
Dulqaadku waa geed kharaar oo soo saara miro macaan- Charles Swindoll
Kasbo inta aad awoodid, bixi inta aad awoodid, kaydso inta aad awoodid- John Wesley.
Qofka aan lahayn mala-awaal ma lahan baadad- Mohamed Ali.
U duul dayaxa haddii aad awoodi waydid waxaad dagaysaa xidigaha.
Nasiibku waa marka ay kulmaan diyaargarowga iyo fursadu-Earl Nightingale
Balan kasta waxa ay leedahay qiime.
Lacagtu waxa ay kuu gadi kartaa daawo lakiin kuuma goyso caafimaad.
Dad badan ayaa iska dhigaya wax aysan ahyn markaas waxay ilaawan waxay ahaayeen waxaana dhuma awoodohoodi.
Noloshu waxa aay aadka ugu dhowdahay wa dhimashada.” —Alan Harris
“markii aad dhalatay, waad ooyday aduunkuna wuu farxay(ehelka), u noolow si marka aad dhimatid aduunku kuugu ooyo adiguna aad u faraxsanaatid. ” —Cherokee Expression
Waqtigu wuu ku gaabiya kuwa suga,wuu ka dheereeya kuwa ka baqa, wuu ku dheeryahay kuwa murugooda, wuu ku gaabanyahay kuwa faraxsan, laakiin kuwa jecel waqtigu wa daa’im.” —Henry Van Dyke
Ma joojino ciyaarta marka aan waynaano laakiin waan waynaana sidas darted wan joojina ciyaarta.” –George Bernard Shaw
Ma badali karno dabaysha lakiin waxaan xajin karna doonta.
Macnaha noloshu waa in nolosha macno loo yeelo.” —Ken Hudgins
Qofka aan lahayn hadaf waa sida markab aan raadaar lahayn.” —Thomas Carlyle
Si aad u aragto dhammaan cilmiga noocyadiisa kala duwan waxaad u baahan tahay oo kali inaad riixdo sawirka hoose,
Tags: Hal Qabsigii iyo Xikmadihii Dadkii Hore
Next post Afka Hooyo Hodansanaa Hiilladiisuna Habacsanaa!
Previous post Ma Ilaalisaa Naadafadda Deegaankaaga?